जब बिर्तामोडमा गुड्यो ‘ड्रिम जिप, मेड इन नेपाल’ ! « Bazar Dainik
11 January, 2022 9:02 am
झापा, २७ पुस ।
विद्यालय पढ्दा लिम्बुको रुचि इञ्जिनियरिङको पढाइतिर थियो । तर जिन्दगीले कहाँ सधैँ सोचेकै बाटो पकड्छ र ? परिस्थितिले उनि मानविकी संकाय तिर भर्ना भए ।
साचेको विषय पढ्न नपाए पनि सानैदेखिको रुचि र लगाव मेटिन्न । उनको विद्युतीय सामग्रीप्रति कति लगाव थियो भन्ने त छरछिमेकले पनि सहजै बताइदिन्छन् । किनकि, उनीहरुलाई थाहा छ, लिम्बुको घरमा कुनै त्यस्ता विद्युतीय सामग्री बाँकी छैनन्, जसका नट र पेचहरु उनले नउघारेका हुन् ।
पढ्न नपाए पनि के भयो र ? इच्छाशक्ति भए अहिले जे पनि सम्भव छ । युट्युब र इन्टरनेटमा बग्रेल्ती सामग्रीहरु पाइहाल्छन् । लिम्बुले त्यही गरे । भन्छन्, “इन्टरनेटमा विभिन्न सामग्री हेरेँ, पढेँ । त्यसैको सहयोगमा यो गाडी बनाएको हुँ ।” उनका अनुसार उनले गाडीको ह्याण्डल प्रयोग छन्, चक्का लगायतका सामग्री आफैं बनाएका हुन् ।
गाडी बनाउन उनलाई चार लाख रुपैयाँ जति लाग्ने भयो । तर पैसा थिएन । मध्यवर्गीय परिवारमा हुर्किएका उनलाई त्यतिधेरै रकम परिवारबाट सहयोेग हुन पनि गाह्रै थियो । “मैले ३ वर्ष लगाएर काम गर्दै पैसा कमाउँदै गाडीमा लगानी गरेँ” सन्तोषको सुस्केरा हाल्दै उनी बोल्छन्, “ पैसा हुने हो भने यतिको गाडी तिन महिनामा बनाउन सक्छु । पैसा नभएकाले केही समय धेरै लागेको हो । यसमा चढ्दा पनि छुट्टै आनन्द मिल्छ ।” लिम्बुका अनुसार यो गाडी प्रति किलोमिटर ८० को गतिमा कुद्छ ।